Forum serasera malagasy Efa manomboka ny fahatanterahan'ny apokalipsa - Dinika forum.serasera.org
Efa manomboka ny fahatanterahan'ny apokalipsa
Fitohizan'ny hafatra : INona moa izany no ilan'Atra olona mpangalatra pao...
endriny - 27/02/2020 17:52
INona moa izany no ilan'Atra olona mpangalatra paoma hisolovava azy?
Inona no ilan'Atra olona efa nozoniny hitondra ny teniny?
Sa dia efa tsy manan-kambo mihintsy ity Atra ity, ka miverina amin'ny efa naloany ohatran'ny …?
Raha tena mamela heloka marina Atra, ary raha toa tena misy izy. Dia tokony miteny kely 1/10 segaondra fotsiny izy hoe: Voavela ny helokareo olom-belona ary tsy ho faty intsony ianareo. Dia teboka famaranana.
Fa maninona no hoe mila sedraina izay handova ny fiainana mandrakizay?
Sa moa izay ilay hoe fampifilafilana sa sadikadikan-draha?
Raha noana sy kere ve ny zanakao 4 taona dia ahatonao amin'ny tady eo ambony valin-drihana ny tapa-mofo maina tokony omena azy? Ary hoy ianao hoe: Raha te hihinana sy afaka hanohanana ianao anaka dia io mihantona io ny mofo
endriny - 27/02/2020 18:03
na nopahon'ny lava-mainty ny tontolo.
merci endriny d'accord ihany ianao ny farany fa ny lava-mainty dia mety hahafoana ny tontolo (galaxie) marina tokoa....
Hay ve efa nanohitra an'izany aho e. Ary tsy tadidiko. Fa ny tadidiko dia ny fanoherana ny nolazainao fa ny lava-mainty dia an'ny demonia
RBNIR - 28/02/2020 00:25
Izay ilay fitiavana Izay.....
Jaona 3:16 MG1865
Fa toy izao no nitiavan’Andriamanitra izao tontolo izao: nomeny ny Zanani-lahy Tokana, mba tsy ho very izay rehetra mino Azy, fa hanana fiainana mandrakizay.
Raha ny tena marina tokoa, raha ny vokatry ny ota izay natao dia tsy mendrika hanana fiainana mandrakizay intsony ny olombelona,
Nefa noho ny fitiavany dia nomena 2nd chance indray....
endriny - 01/03/2020 08:23
Eny ho’a e: nanao sorona zanaka lahitokana fa tsy akoho fataka. Maty aho marina. Ka tsy aleo ihany Ikelimaditra raha izany.
RBNIR - 01/03/2020 12:56
Afaka tsy niraharaha ny zanak'olombelona Andriamanitra..dikany tsy nisy intsony fanantenana vaovao ny handova fiainana mandrakizay indray...
fa tsy nety ny fony fa naniraka ny Zanany ihany izy mba hananan'ny olona fanantenana vaovao ny hanana fiainana mandrakzy...
Ny Zanany ange no nataony sorona fa tsy ny zanak'i endriny e!!!
Misy secret io rà latsaka io..
« Ary saiky diovina amin'ny rà avokoa ny zavatra rehetra araka ny lalàna; fa raha tsy misy rà alatsaka, dia tsy misy famelan-keloka. » (Hebreo 9:22)
Ary Jesosy dia nanaiky antsitrapo fa tsy hoe noterena..
« fa ity no rako, dia ny amin'ny fanekena*, izay alatsaka ho an'ny maro ho famelan-keloka.[*Na: (ny fanekena vaovao)] » (Matio 26:28)
Raha fantatry ny devoly izay secret izay (tsy misy famelan-keloka raha tsy nisy rà latsaka) dia tsy ho novonoiny i Jesosy....
« Anefa milaza fahendrena amin'ny efa matanjaka izahay, fa tsy ny fahendren'izao tontolo izao, na ny an'ny mpanapaka izao tontolo izao, izay olona mihalevona; » (1 Korintiana 2:6)
« fa milaza ny fahendren'Andriamanitra izahay ka maneho zava-niafina, dia fahendrena izay nafenina sady voatendrin'Andriamanitra ho voninahitsika talohan'ny nanaovana izao tontolo izao; » (1 Korintiana 2:7)
« ary tsy nisy nahalala izany ny mpanapaka izao tontolo izao; fa raha nahalala izy, dia tsy nohomboany tamin'ny hazo fijaliana ny Tompon'ny voninahitra. » (1 Korintiana 2:8)
rhaj0 - 02/03/2020 01:57
Izany hono ry Endriny aaa.. Rehfa latsaka ny rà dia misy famelan-keloka, hozy RBNIR sy ny finonoampoanany
HOtry ny hoe rahefa mandeha rà orona ianao, izay vao voavela ilay tazo
na koa ady totohondry io, raha tsy boba-rà ilay andaniny tsy voavela
Na koa hoe, rahefa tonga fotoana ny vehivavy, dia voavela hono ny heloky ny lehilahy ee..
tena tsy haiko hoe, IZA no mbola minomino foana an'izany @ izao 2020 izao.
RBNIR - 02/03/2020 06:38
ny fahitako azy indray rhajo dia tsotra, voafitaky ny tsy fahalalanareo ianareo ireo ary mampalahelo...
Ny tena marina na ny tantaran'i jesosy sy ny tantaran'ireo mpianany aza tsy misy fantatrareo akory nefa dia iny no hitompoanareo teny fatratra....
Mampalahelo, Hampahiratra ny masonareo anie Izy...
endriny - 02/03/2020 12:54
Fa angaha indray aza I Atra tsy mahavita miteny fotsiny dia poa toa izay dia vita ilay zavatra. Fa inona indray ity delira “tsy mety ny fony” ity. Fa angaha Atra manana fo
RBNIR - 02/03/2020 13:03
Hoy i Jesosy hoe « Tsy izay rehetra manao amiko hoe: Tompoko, Tompoko, no hiditra amin'ny fanjakan'ny lanitra, fa izay manao ny sitrapon'ny Raiko Izay any an-danitra. » (Matio 7:21)
Izay manao ny sitraky ny fon'ny Rain'i Jesosy ihany hono no hampidiriny any amin'ilay fanjakan'ny lanitra!!!
gasy1zay - 02/03/2020 15:57
Mahalala kosa rhaj0 e! Tena betsaka ny zavatra hainy mikasika an'i Jesoa sy ny mpianany ary ny baiboly fa ny olany dia tsy mety mino izy fa manamafy fo... izy hono intelligent lavitra noho ireo kristiana amina milliard erantany mametraka ny fiainany ao @ JK.
rhaj0 - 02/03/2020 16:08
ya.. ya.. fara-fahakeliny aho, TSY minomino an'ilay hoe:
pouh pouh pouh ... mikimpy mafy toa constipE fotsiny, dia ... lasa virgin-again...
pouh pouh pouh ... raha latsaka ny rA, dia tonga dia afak'ota daholo (rahefa manaraka ilay livre de recette tontan'ny ela)..
RBNIR - 03/03/2020 08:01
raha nahafantatra ny tokony ho fantatra ianao rhajo!!! resultat (efa nino ianao otran'izay)
ka io efa nambarako hatrany tsy ny mahay ange no tanjona fa ny pratika no hitsarana ny olona e!
Mety misy olona mahay nefa tsy mampihatra dia mitovy amin'ny olona manao tompoko tompoko ihany.....
RBNIR - 03/03/2020 08:07
« Kanefa tsy mety manatona Ahy ianareo hanananareo fiainana. » (Jaona 5:40)
Raha fintinina dia io no manjo an'i rhajo sy izay olona tahaka azy...
Mandinika ny Soratra Masina izy nefa......tsy mety manatona an'i Jesosy......mba hananany fiainana....
rhaj0 - 03/03/2020 16:07
hi hi hi... izaho re TSY mandinika SM izany ry izy roaroa aaa...
Ineny Gogola no tateriko eto, satria dia mampivanitika gilady ahy
RBNIR - 04/03/2020 08:15
teny avy ao amin'ny SM ireny na tianao na tsy tianao e! tandremo hoy aho sao hajabaky ny google ao ka fampianarana avy amin'ny mpampianatra sandoka no ho voarainao ao....
endriny - 04/03/2020 09:03
Ary kay Atra manana fo ve? Izay indray aho vao nahare izany
RBNIR - 04/03/2020 09:46
matoa i JEsosy miteny hoe tsy izay manao Tompoko Tompoko no hiditra ny fanjakan'ny lanitra fa izay manao ny sitrapon'ny Raiko izay any an-danitra
Sitrapo = sitraky ny fo dia manana fo Izy izany saingy mety tsy araka ilay imaginen'i endriny fotsiny ilay izy satria tsy nofo Izy fa Fanahy...
graharimanana - 13/03/2020 08:17
Ohatra izao efa akaiky ny fanaovana chirurgie ny lohalika, automatique. Ny lohaliko malemy ato izany mety avotra vetivety koa ato ho ato. Na ny eye bionic. @ io AI io anie dia mandeha exponentiellemment ny fivoarana ee...
Fa ianao anie ry Gasy1zay, raha tena "mino ara-baki-teny" ary manaja izay rehetra voasoratra ao @ Baiboly ao, dia maninona tokoany azany ianao no hivaky loha @ izay eye bionic any ohatra. (mety asan-devoly izao io HONO, satria atheist no mety hoe namorona azy)
Fa ho fanajanao GAsy1zay ny finoanao, dia (tokony) ilay recette fotaka+rora namen'i Jesosy ao anaty Baiboly izao no tokony ataonao ao.
Fa mampalelo fa TsY ataonao, satria TSY mino an'izany recette-nJesosy izany ianao ry Gasy1zay.
Nefa anie tsy mety mandeha aminao Gasy1zay ilay recette, satria, hozy Jesosy izay hoe, TSY AMPY finoana ianao eee...
hi hi hi.. dia ao ianao izany ry Gasy1zay aa